कोरोनाभाइरस जाँच्न 'आरडीटीमा भर पर्दा ज्यान गयो, गल्ती सरकारको कि कसको?' - Dainik Online Dainik Online
कोरोनाभाइरस जाँच्न ‘आरडीटीमा भर पर्दा ज्यान गयो, गल्ती सरकारको कि कसको?’
प्रकाशित मिति : ११ असार २०७७, बिहिबार २ : ५२
काठमाडाैं । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका दैलेखका कर्णबहादुर थापाकी पत्नी भविसरा सरकारको लापर्बाहीका कारण आफूले पति गुमाउनुपरेको दुखेसो पोख्छिन्। उनी भन्छिन्, “क्वारन्टीनमा राख्नेबित्तिकै सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए समयमै रोग पत्ता लाग्थ्यो। आरडीटीले न रोग पत्ता लाग्यो, न ज्यान बच्यो।”
भारतको गुजरातबाट गत जेठ ८ गते स्वदेश फर्किएका कर्णबहादुरको जेठ १७ गते दुल्लुस्थित क्वारन्टीनमा मृत्यु भएको थियो। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गएका अरू व्यक्तिका आफन्तको गुनासो पनि उस्तै छ।
आरडीटी परीक्षणलाई दोष
उनीहरू आरडीटी परीक्षणले धोका दिँदा आफन्त गुमाउनुपरेको पीडा पोख्छन्। जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पाका प्रकाश थापा भन्छन्, “आरडीटीको सट्टा पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको भए कान्छाबुवाको ज्यान जाँदैनथ्यो।”
कोरोनाभाइरसको डरले सुर्खेतबाट डेढ बर्षपछि घर फर्किएका उनका कान्छाबुवा सुज्जुको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट गत जेठ २१ गते ज्यान गएको थियो । आरडीटी जाँच गर्दा सङ्क्रमणको सङ्केत देखिएपछि होम क्वारन्टीनमा बसेका सुज्जुको निधन भएको आफन्तले बताए।
“घर नआएर तलै (सुर्खेत) बसेको भए केही हुँदैनथ्यो होला”, सुज्जुकी श्रीमती सार्केनी भन्छिन्, “घर आउने नाकामै रोग पत्ता लाग्ने जाँच (पीसीआर) परीक्षण गरेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो।”
घर पुगेको पौने घण्टामै निधन
आरडीटी परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि १४ दिन क्वारन्टीनमा बिताएर घर पुगेको एक घण्टाभित्रै पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतका १९ वर्षीय कृष्णबहादुर तारामीको मृत्यु भएको आफन्त बताउँछन्।
बुवा पूर्णबहादुरले क्वारन्टीनमा बसेर घर आएको छोरासँग राम्ररी देखभेट नै नभएको बताए। उनी भन्छन्, “सरकारको हो कि डाक्टर कसको कमजोरीले छोराको ज्यान गयो। सही रिपोर्ट देखाउने परीक्षण नगरेर किन घर पठाइयो? पीसीआर परीक्षण गरेको भए ज्यान जाँदैनथ्यो कि?”
अहिलेसम्म कोभिड-१९ का कारण अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा चार जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। उनीहरूमध्ये तीन जनामा मरणोपरान्त गरिएको परीक्षणमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको आफन्तहरू बताउँछन्।
अर्का मृतक भने क्षयरोगको बिरामी रहेको र उपचारका क्रममा जाँच गर्दा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्की एक महिलाले क्वारन्टीनबाट घरमा फर्किएपछि आत्महत्या गरेकी थिइन्। पछि उनमा पनि पछि सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।
‘सीधै पीसीआर गरेको भए हुन्थ्यो’
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका दैलेखका कर्णबहादुर थापा र सुर्खेतका कृष्णबहादुर तारामी भारतबाट फर्किएका थिए। चौध महिनापछि फर्किएका कर्णबहादुरको क्वारन्टीनमा बसेको १० दिनमा मृत्यु भएको थियो।
थापाका बहिनीज्वाइँ क्षेत्रबहादुर बोगटी भन्छन्, “आरडीटी नगरी समयमै पिसीआर गरेको भए बचाउन सकिन्थ्यो, मृत्यु भइसकेपछि पीसीआर परीक्षण गर्नुको के अर्थ ?” कमाउने पतिको मृत्यु भएपछि छोराछोरीको पालनपोषण गर्नर नयाँ घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न समस्या भएको भविसरा बताउँछिन्।
उनको खेतबारीमा फलेको अन्नले वर्षभरि खान पुग्दैन।
डोल्पाका सुज्जुकी श्रीमती सार्केनी पतिको निधनपछि पाँच छोरी र एक छोराको पालनपोषणको जिम्मा आफ्नो काँधमा आएको बताउँछिन्। दुई छोरीको विवाह भइसकेपनि चार छोराछोरी पढिरहेका छन् । छोराछोरीको शिक्षाका लागि सरकारले सहयोग गरिदेओस् भन्ने उनको अपेक्षा छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाभाइरसबाट मुत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको छ। कृष्णबहादुर तारामीका बुवा भन्छन्, “मृत्यु भएपछि एक लाख राहत दिनुभन्दा पहिले नै राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। राहत रकमले केही गर्न सकिँदैन।”
मुम्बईको होटेलमा सहयोगीको काम गर्ने सुर्खेतका कृष्णबहादुर गाउँका साथीहरूसँगै घर फर्किएका थिए। उनका दाइ गणेशबहादुरले भने, “बम्बैबाट रूपेडियासम्म सुरक्षित नै आएको जस्तो लाग्छ। जमुनाहामा हजारौँ मान्छेसँग घुलमिल भएको थियौँ।”
क्वारन्टीनमा बसेको १४ दिन पुगेपछि दुई भाइ त्यही दिन दिउँसो ३ बजेतिर हिँडेर राति १२ बजे हाँसेगाउँस्थित घर पुगेका थिए। खाना खाएर घरनजिकै बनाइएको होम क्वारन्टीनमा सुतिरहेको बेला एक्कासि भाइको मृत्यु भएको गणेशले बताए।
अर्को दिन सेनाले शव गाडे पनि उनका परिवारले अहिलेसम्म पनि “जूठो” उठाएका छैनन्। बुवा पूर्णबहादुर तारामी भन्छन्, “कान्छो छोरा बितेपछि जेठो छोरा र म फेरि १४ दिन क्वारन्टीनमा बसेर अहिले सात दिनको होम क्वारन्टीनमा बसेका छौँ।”
काठमाण्डूमै माइलो छोरा र भारतबाट माइलो भाइ आएपछि मात्रै परम्पराअनुसार काजकिरिया गर्ने उनी बताउँछन्।
के अवस्थामा सुधार आएको छ?
बुधवारसम्म कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका २६,९०६ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको जानकारी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले दिए।
बुधवार अपराह्णसम्म १,३५८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने ५६८ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक रीता भण्डारी जोशीका अनुसार सुरुसुरुमा आरडीटी परिक्षण गरिएको भए पनि अहिले पीसीआर परीक्षणलाई प्राथमकिता दिइएको छ।
उनी भन्छिन्, “केन्द्रीय निर्देशिकामा आरडीटी परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएकाहरूको मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने उल्लेख भए पनि गुनासो आउन थालेपछि हामीले जोखिम अवस्थाका समूह र व्यक्तिको सीधै पीसीआर परीक्षण गर्न थालेका छौँ।”
कुनै लक्षण नदेखिएर एक्कासि ज्यान गएकोले मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नभई अरू कारणले पनि ज्यान गएको हुनसक्ने निर्देशक जोशीले बताइन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार बिहीवार बिहानसम्म क्वारन्टीनमा रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या ७,००० भन्दा बढी छ भने अहिलेसम्म ५०,७०० जनाभन्दा बढी घर फर्किएका छन्।
कामपामा आकाशे पानी सङ्कलन र पुनर्भरण अभियान